Knowledge Archives - Page 27 of 40 - Khitamyin
အ‌ဖြေထွက်‌နေပြီဖြစ်သောပုစ္ဆာနဲ့ တော်လှန်ရေးဇာတ်သိမ်း (သို့) တဖက်သက်ကစားပွဲနဲ့ ပြည်သူ့စည်းလုံးညီညွတ်မှု အင်အား [ ချီးနား UN VS ကမ္ဘာ နဲ့ မြန်မာ ]
July 31, 2021Ko Khit0 Comments
အ‌ေျဖထြက္‌ေနၿပီျဖစ္ေသာပုစာၦနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးဇာတ္သိမ္း (သို႔) တဖက္သက္ကစားပြဲနဲ႔ ျပည္သူ႔စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အင္အား [ ခ်ီးနား UN VS ကမာၻ နဲ႔ ျမန္မာ ] ကစားပြဲစီစဥ္သူက ခ်ီးနားတ်ဳတ္…
ဆဲရေးတိုင်းထွာတာကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာငယ်ငယ်ထဲက မိဘဆရာသမားတွေ သင်ကြားထားလို့အတွင်းစိတ်ထဲကကို သိနေပါတယ်။ ‌စောက်ဆိုတဲ့စကားတလုံးပြောဆိုမိတာတောင်ရိုက်ခံရတယ်။ ပါးစပ်ကို အပ်နဲ့ဖေါက်မယ်နောက်တခါဆဲကြည့်ဆိုတဲ့ အဘွားစကားလဲနားထဲကမထွက်လို့ခုထက်ထိဆဲရေးတိုင်းထွာပြီးမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါကတော့ မှတ်သားစရာလေးပါ။ ဆဲရေးခြင်း(၁၀)မျိုး ၁။ ဇာတိ = ဇာတ်ကိုထိပါး၍ ဆဲရေးခြင်း ၂။…
UN ကစားကြက္၊ စစ္တပ္နဲ႔ ျမန္မာ့ေႏြဉီးေတာ္လွန္ေရး [ ကမာၻႀကီးအတြက္ တရားမွ်တမႈ အခ်ိန္ ]
စစ္တပ္ ၊ UN ကစားကြက္နဲ႔ ျမန္မာ့ေႏြဉီးေတာ္လွန္ေရး [ ကမာၻႀကီးအတြက္ တရားမွ်တမႈ အခ်ိန္ ] – ဆရာဝန္ေတြ ဖမ္းစီး သတ္ျဖတ္ၿပီး – ေဆးဝါးေတြ…
အာဏာသိမ်းရတဲ့ ဒုတိယအချက် သို့မဟုတ်ပြည်သူ့အစိုးရရဲ့ လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း အကောင်အထည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ..နောက် လာမည့်5နှစ်အတွင်း E Government ကို စတင် အကောင်အထည်…
တ႐ုတ္ဟာ ကမာၻကို အမွန္တကယ္သိမ္းထားၿပီလား[ UN ဘာလဲ ဘယ္လဲ ? ]
တ႐ုတ္ဟာ ကမာၻကို အမွန္တကယ္သိမ္းထားၿပီလား[ UN ဘာလဲ ဘယ္လဲ ? ] ျမင္ေနရသေလာက္ တ်ဳတ္ဟာ ကမာၻကို မသိမသာ သိမ္းထားၿပီးေနပါၿပီ ဒါေၾကာင့္ US ဟာ…
စစ္ေျပၿငိမ္းေရး သ၀ဏ္လႊာဂ်င္းနဲ႔ စကစရဲ႔အကြက္
July 30, 2021Ko Khit0 Comments
စစ္ေျပၿငိမ္းေရး သ၀ဏ္လႊာဂ်င္းနဲ႔ စကစအကြက္ မအလက KIA ကို စစ္ေျပၿငိမ္းဖို႔ သ၀ဏ္လႊာပို႔သတဲ့ ဒါကို သူံးသပ္ၾကည့္ရရင္ ေရွ႕မွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ လုပ္‌ေဆာင္ၿပီး သူတို႔ပဲ ထိုးစစ္ဆင္ျပဳေနသလို ခုလည္း…
နွေဦးတော်လှန်ရေးက အောင်မြင်အုံးမှာလား ဆိုတဲ့ မွေးခွန်း
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးကို သိစေချင်တာက နွေဦးတော်လှန်ရေးက အောင်မြင်နေပါပြီ စနစ်ဆိုးရဲ့အပြောင်အလဲပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒီအပြောင်အလဲအတွက်လည် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကိုဗစ် ဘေး၊ စစ်အကြမ်းဖက်ဘေး၊ စနစ်အပြောင်းအလဲ သုံးပွင့်ဆိုင်…
ပေါက်လိုက်တဲ့သေးကို စွမ်းအင်ပြန်ပြောင်းပေးပြီး၊ ပိုက်ဆံပါပေးဦးမယ့် သန့်စင်ခန်း
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်တခုဟာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့သေးကို အကျိုးရှိရှိသုံးနေပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဖန်တီးထားတဲ့ စပါရှယ်အိမ်သာတခုကို ကျောင်းမှာဆောက်ထားပြီး၊ ရလာတဲ့သေးနဲ့ တက္ကသိုလ်တခုလုံးကို စွမ်းအင်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ ချိုဂျေးဝန်(Cho Jae-weon)က…
မနေ့က ငလျင်လှုပ်တာကို နက္ခတ်နဲ့ရော၊အင်္ဂဝိဇ္ဇာအရရော၊ဂြိုဟ်ပိုင်စိုးမှုအနေနဲ့ရော ထောင့်စုံကနေတွက်ကြည့်တဲ့အခါ
မနေ့က ငလျင်လှုပ်တာကို နက္ခတ်နဲ့ရော၊အင်္ဂဝိဇ္ဇာအရရော၊ဂြိုဟ်ပိုင်စိုးမှုအနေနဲ့ရော ထောင့်စုံကနေတွက်ကြည့်တဲ့အခါ ပြည်သူ့အောင်ပွဲနမိတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရက်က ၂၉ . ၇ .၂၀၂၁ ၊ ဖုသျှနက္ခတ်စီးပြီး စနေဂြိုဟ် ပိုင်စိုးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်က ကြာသပတေးနေ့ ညနေ…
ႏိုင္ငံအတြက္ အာဏာ႐ူးေတြဘက္ကို ေျပာင္းလွည့္သင့္ၿပီ ရဲေဘာ္တို႔
July 29, 2021Ko Khit0 Comments
ႏိုင္ငံအတြက္ ေျပာင္းလွည့္သင့္ၿပီ ရဲေဘာ္တို႔ ျပည္သူေသေစခ်င္လို႔ မကုေပးတာေတာ့ ထားေတာ့ ဟုတ္ၿပီ သူတို႔ စစ္သားေတြနဲ႔ ရဲေတြ မိသားစုဝင္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ကုသခြင့္မေပးပဲ ပစ္ထားတာလဲ‌ဆိုရင္ မအလဟာ အခ်င္းခ်င္းေတာင္…